စကား – နေ့စဉ် Word Challenge လှည့်စားမှုများ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
စကား – နေ့စဉ် Word Challenge လှည့်စားမှုများ&Hack
အားဖြင့် Editor | ဇန်နဝါရီလ 14, 2022
စကား – နေ့စဉ်စကားလုံးစိန်ခေါ်မှု – သင့်အား အခမဲ့စကားလုံးစိန်ခေါ်မှုအသစ်များကို နေ့စဉ် ပေးပါသည်။!
ဤသက်သာသော ဝေါဟာရဂိမ်းတွင် မှန်ကန်သောစကားလုံးများကို ရှာဖွေရန် သင့်ဦးနှောက်ကို လေ့ကျင့်ပေးပါ။.
ဤအခမဲ့ပဟေဠိစကားလုံးဂိမ်းဖြင့်နေ့စဉ်ဦးနှောက်လေ့ကျင့်မှုပမာဏကိုရယူပါ။. Scrabble ကဲ့သို့ ဂန္တဝင်စကားလုံးဂိမ်းများကို နှစ်သက်သူများ, crosswords သို့မဟုတ် anagrams များသည် ဤစကားလုံးအမဲလိုက်ခြင်းနှင့် စာလုံးပေါင်းဝေါဟာရဂိမ်းကို နှစ်သက်လိမ့်မည်။. သင့်ရလဒ်များကို သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် မျှဝေနိုင်ပြီး သင် ဘယ်နေရာရောက်ရောက် အနိုင်ယူရန် သူတို့ကို စိန်ခေါ်နိုင်ပါသည်။!
နေ့တိုင်း ခန့်မှန်းရန် စကားလုံးအသစ်တစ်ခုကို သင်ရလိမ့်မည်။. Wordle သည် အမှန်တကယ်ပင် စိန်ခေါ်မှုနှင့် စွဲလမ်းစေသော အတွေ့အကြုံတစ်ခုအတွက် အကောင်းဆုံးစကားလုံးရှာဖွေခြင်းနှင့် စကားလုံးဆက်စပ်ဂိမ်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။!
စကား – Daily Word Challenge ပါရှိပါတယ်။:
• နေ့စဉ် ခန့်မှန်းရန် စကားလုံးအသစ်
• နေ့စဉ် ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ခြင်း။: ဤဝေါဟာရဂိမ်းတွင် စာလုံးများစုဆောင်းပြီး စာလုံးပေါင်းပါ။
•သင်ယူရန်လွယ်ကူသည်: Scrabble ကဲ့သို့သော မည်သည့်စကားလုံးဂိမ်းကိုမဆို နှစ်သက်သူများအတွက် စိန်ခေါ်သောစကားလုံးဂိမ်း, စကားဝှက်များ, scramble နှင့်အခြားစကားလုံးပဟေဠိ!
• စိတ်လျှော့ပါ။: မှန်ကန်သောစကားလုံးကိုရှာဖွေနေစဉ် ဇုန်ထဲသို့ဝင်ပါ။
• သင့်သူငယ်ချင်းများကို မျှဝေပြီး စိန်ခေါ်ပါ။
စကား – Daily Word Challenge သည် အမှန်တကယ် စိန်ခေါ်မှုနှင့် စွဲလမ်းစေသော အတွေ့အကြုံအတွက် ဖန်တီးသည့် အကောင်းဆုံး စကားလုံးရှာဖွေခြင်းနှင့် စကားလုံးဆက်စပ်ဂိမ်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။!
စကား – နေ့စဉ် Word Challenge သည် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ကစားရန် အခမဲ့ဖြစ်သည်။.
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): စိန်ခေါ်တယ်, မင်္ဂလာပါ, Daily, word, စကား
← အကောင်းစား Poppy Rope ဂိမ်း – လှိုင်သာယာ&Hack HexaPop လင့်ခ် 2248 – လှိုင်သာယာ&Hack →
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တိရိစ္ဆာန်အုပ်စုက မင်းရှေ့မှာရှိတဲ့အခါ – လှိုင်သာယာ&Hack
Happy Clinic – လှိုင်သာယာ&Hack
Veggie Onet – လှိုင်သာယာ&Hack
Merged Cyborg – လှိုင်သာယာ&Hack
Poppy Survival Game – လှိုင်သာယာ&Hack
Stack Smash – လှိုင်သာယာ&Hack
Dismount Simulator – လှိုင်သာယာ&Hack
Te Reo Māori/mi/wordle-daily-word-challenge-cheatshack/
gagana fa'a Samoa/sm/wordle-daily-word-challenge-cheatshack/